Haweeney Noolasha ku Silicday ugu Dambeyna Libin ka Gaartay | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Helen Warade waa hooya 3 carruur ah oo ay dhashay oo ay weliba aabba la’aan soo korsatay halmar ay si lama filaan ugu wada geeriyoodeen. Dab gurigeeda qabsaday ayey hal mar ku wada gubteen 3 carruur oo ay iyadu dhashay, walaasheed iyo ilma ay walaasheed dhashay qoyskeeda oo guud ahaan ka kooban 5 qof.
“Carruurta inta ay iga geeriyoon ka hor waxaan dhibaata aad u badan kala kulmay korintooda iyo barbaarintooda caruurta oo 3 iskuul oo kala duwan wax ka baranaysay inaan iskuulka geeyo ama aan ka keeno waxay igu ahayd mid aad u adag” ayey tiri Helen. Seddexada carruurta ah ee Helen marka wada geeriyooday Yoseef wuxuu ahaa 13 jir, Yasen oo 5 jir ah iyo Nisren oo 6 jir ah waxay ahaayeen ubaxyada ay dunida ka fiirsato.
Maalin maalmaha ka mid ah ayey xaaladda qoyskeeda oo dhan si lama filaan ah iisu beddeshay. Muddo hadda 10 sano laga jooga oo ku beegneyd 2010-ka, barqanimo Sabti ah guriga ay Helen ku nooleyd ayaa laga maqlay qaylo aad u daran, waxaana gurigeeda hortiisa ku uruursan dad badan oo ka soo jeeda dalka Itoobiya oo ku nool gobolka Seattle.
Helen waxaa ila iyo hadda xusuusteeda ka bixi la’ marki ugu dambeysay ee ay carruurteeda iyo qoyski ka geeriyooday ay wakhti la qaadatay. “Aniga waxa sida lama filaanka ah iigu dhacay waxay ahayd mid awooddeyda ka baxsan oo aan xammili waayey, carruurteyda aan ifka ugu jeclaa dabka waan ka badbaadin waayey, ilaa iyo hadda waxaa igu dhib ah inaan dhacadadaasi ka hadlo … (ilma ayaa indhaheeda ka qubaneysa) … runti dhib aad u weyn ayaa igu dhacay” ayey tiri Helen.
Helen marki ay dhulkeeda hooyo ka tageysay 2 jir ayey ahayd. Kaddibna qoyskeeda ayaa u hayaamay dalka Sudaan muddo siddeed sana ahna halkaasi ku noolaa.
Helen waxay markastaba afkeeda aan laga waayin mahadnaqa iyo sharafta ay u hayso hooyadeed iyo dhammaan shacabka reer Seattle sida ay u garab istaageen xilligi ay masiibadu ku habsatay. Muddo kaddib Helen waxay billaawday baalki madoobaa ee noolasha ka soo maray iney u aragto fursad ay cashar ka baraneyso kaddibna ay uga gudubta fursadda labaad ee noolasha.
Qoyska Helen ee shanta ka kooban ee ay dabkaasi ku weysay
Waxaan ku fakaray inaan dalkeeyga hooyo iyo halka ay waaliddiinteyda ka soo jeedaan aan ka aasaaso xaruun caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka lagu daweeyo. Awooddeeda oo dhan waxay isugu geysay iney fikirkeeda ka mira dhaliso.
Tags: Haweeney Noolasha ku Silicday ugu Dambeyna Libin ka Gaartay
Next post Culumada Sayniska ee Daaha Ka Qaaday Aragtida Atamka
Previous post Gabar Ku Xirnayd Xabsi Ku Yaalla Kuuriyada Waqooyi oo La Baxsatay Askarigi Illaalinayey